Global Voices teny Malagasy » Myanmar: Resaka manodidina ny amboara eran-tany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Jolay 2010 19:48 GMT 1	 · Mpanoratra tan Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka
Ireo mpankafy baolina kitra mipetraka any Yangon dia faly satria lasa mandeha tsara kokoa ny herinaratra , noho izany dia afaka mijery ireo lalao baolina kitra izy ireo. Na dia izany aza, dia mbola misy ihany no tapatapaka ny herinaratra any amin'ireo faritra sasany. Manoratra i Maung , izay niverina avy tany Myanmar:
Maro ireo vehivavy Birmana no tena mpankafy ny amboara eran-tany. Manaraka ireo valin'ny lalao izy ireo, ary mamoaka izany any amin'ireo valam-piarahamonina tahaka ny Facebook. Iray amin'izy ireo i Thet Wai , vehivavy Birmana mitoetra any Singapore:
“Tena mampietam-po ny mijery ny amboara eran-tany ny baolina kitra voalohany indrindra, manomboka hatramin'ny lalao voalohany ka hatramin'ny lalao farany amin'ny fahitalavitrako any an-trano,” hoy ny mpankafy iray tany Rangoon, notaterin'i Irrawaddy Media .
Na izany aza dia tsy afaka mampiseho ny sasany kely amin'ireo lalao nanomboka eo amin'ny 18 Jona ka hatramin'ny 21 Jona noho ny “olana ara-teknika “, izay nahatezitra  mpankafy maro ny fahitalavitra Myawaddy. Noho izany dia tsy maintsy nijery ireo lalao tao amin'ny fahitalavitra MRTV izy ireo. Voavaha  taorian'ny 22 Jona ny olana.
Nandritra ny lalaon'ny amboara eran-tany, dia afaka namoaka vaovao manokana mikasika ny amboara eran-tany  ny gazety mpivoaka isan-kerinandro vitsy ka nalaza teo amin'ireo mpankafy izany. Ny Gazety Premier Eleven Sports ihany koa dia afaka nandefa solontena ny tonia ho any Johannesburg hanao ny fitantarana mivantana amin'ny vohikalam-baovao amin'ny teny Birmana .
Maro ireo mpitoraka blaogy Birmana no nanoratra mikasika ireo vaovao mifandraika amin'ny amboara eran-tany tahaka ny 11 Dreams , izay nizara amin'ny mpamaky azy ny sarin'ireo kianja 10 anaovana ireo lalao mandritra ny fiadiana ny amboara erantany. Maro ny faly fa nisy vehivavy teratany Myanmar 2 tao amin'ny rakikiran'i Shakira Waka Waka. Nanoratra i Htoo Tayzar :
Naheno aho fa nisy teratany Birmana tao amin'ilay hira, noho izany dia nijery izany tsara mihitsy aho. Namaky ilay fanadihadihana  fa nisy 3 mirahavavy tao anatin'iny lahatsary iny. Ie, marina izany: hitanao ary aoriana izy ireo, ary amin'ny ankavanana dia hitanao fa miakanjo manga sy volom-parasy izy ireo. Nitafy akanjo nentim-paharazana Birmana sy longyi izy ireo.
Nay Nay Naing  nizara ny lahatsary sy ny tononkiran'ny amboara eran-tany, ary nanoratra:
Nefa, ny sasany dia hiandry ny fahavitan'ny fiadiana ny amboara erantany. Bakirompitra ny toeram-pilokana an'ny fanjakana  hatramin'ny herinandro, ary ireo vondrona mikasika ny dihy nentin-drazana Birmaniana dia voatery nanemotra ny fotoam-pampisehoany  mandrapaha-vitan'ny fiadiana ny amboara eran-tany.
Araka ny nosoratan'i Myo Thein  tamin'ny matoandahatsoratr'i Mizzima,
Ireo izay nangataka ny fidiran'izy ireo amin'ny fifidianana 2010 dia nangina nandritra izy fiadiana ny amboara eran-tany ity. Izany dia noho ny fisarihan'ny baolin'ny amboara eran-tany Jabulani  (midika hoe “mifaly” amin'ny teny Zolo), ny sain'ireo mponina ho any Afrika Atsimo mandrapaha-tongan'ny 11 Jolay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/12/7070/
 lasa mandeha tsara kokoa ny herinaratra: http://irrawaddymedia.com/article.php?art_id=18713
 olana ara-teknika: http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3476
 izay nahatezitra: http://www.mizzima.com/business/4050-world-cup-fans-angered-at-telecast-failures-.html
 vaovao manokana mikasika ny amboara eran-tany: http://www.irrawaddymedia.com/article.php?art_id=18810
 hanao ny fitantarana mivantana amin'ny vohikalam-baovao amin'ny teny Birmana: http://eversion.elevenmediagroup.net/index.php?option=com_content&view=article&id=619
 Bakirompitra ny toeram-pilokana an'ny fanjakana: http://www.mizzima.com/business/4080-world-cup-fever-leaves-lottery-retailers-out-of-play.html
 voatery nanemotra ny fotoam-pampisehoany: http://www.mizzima.com/business/4060-world-cup-kicks-traditional-dancers-off-stage.html